Saturday October 06, 2018 - 13:58:18 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Isagoo mid kamida Hoteellada magaalada Baydhabo kula hadlayay xildhibaanno iyo siyaasiyiin katirsan maamulka 'Koonfur Galbeed' ayuu Mukhtaar Rooboow soo bandhigay waxqabadkiisa haddii madaxweyne loo doorto.
Rooboow ayaa ugu horrayn soo hadal qaaday amar shalay kasoo baxay wasaaradda Ammaanka DF-ka oo kammanuucayay in uu iskusii sharraxo hoggaaminta maamulka Koonfur Galbeed.
Warka DF kasoo baxay ayaa ku tilmaamay mid siyaasadeed oo qeyb ka ah isjiid jiidka ka dhaxjira maamulka gobolleedyada iyo Villa Somalia islamarkaana uu sii wadan doono diyaar garoowga uu uga qeyb gelayo doorashada.
Dadka ku howllan ololihiisa siyaasadeed ee doorashada ayuu ugu baaqay in ay dadaalkooda sii laba laabaan islamarkaana aysan dheg jalaq usiin dhawaqa diidmada ah ee ka imaanaya Muqdisho.
Mukhtaar Rooboow ayaa tobaneeyo Xildhibaan oo uu ka hor hadlayay wuxuu usharraxay mashruuciisa siyaasadeed ee uu ku hoggaamin doono maamulka magaalada Baydhabo haddii ay isaga madaxweyne u doortaan.
Wuxuu ballan qaaday illaa sedax arrin haddii uu noqdo madaxweynaha maamulka 'Koonfur galabeed', isagoo hadlayay ayuu sheegay in sedax dhinac ay dhibaato ku hayaan deegaannada gobollada Bay iyo Bakool.
"Al Shabaab oo aan ogoleyn Nabad iyo Jiritaan,Ciidamo Beeleed Hubeysan, ciidamo dareeska dowladda dadka ku dhiba" sidaas ayuu Rooboow ka sheegay kulankii uu la qaatay Xildhibaannada.
Wuxuu ballan qaaday haddii madaxweyne maamul goboleed loo doorto in uu madaxda maamulkiisa ufuri doono wadada laamiga ah ee isku xirta Muqdisho iyo Baydhabo oo hadda Al Shabaab ay dhan ka joogto.
Rooboow oo umuuqday Nin isbedel weyn ka muuqdo marna sooma hadal qaadin in dhibaatada Gobollada Bay iyo Bakool kajirta ay qeyb ka yihiin ciidamada Xabashida Itoobiya ee Kufsiga iyo gummaadka ku haya bulshada Rayidka ah waxaana muuqata in uu gacal iyo xigto ka dhigtay Itoobiya cadowgiisi shalay oo hadda noqotay saaxiibadiisa maanta.
Sanadadii uu ahaa Afhayeenka Xarakada Al Shabaab ayuu Mukhtaar Rooboow ciidamada Itoobiya ku tilmaami jiray cadow soo jireen ah "Itoobiya waa dawaca bakhtiday kaliya in lays raacsiiyo ayay ubaahantahay" ayuu yiri Rooboow sannaddii 2009 mar uu warbaahinta lahadlayay.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in magaalada Baydhabo ay ka socdaan dhaq dhaqaaqyo siyaasadeed oo uu dhaxeeya Rooboow iyo Shariif Sakiin, dowladda Federaalka ayaa wadata Nin lagu magacaabo Fargeeto oo horay usoo noqday wasiirka maaliyadda taas ayaana keentay in ay soo saarto warsaxaafadeed Rooboow ka dhan ah.
Hadalladii uu Khamiistii lasoo dhaafay ka jeediyay magaalada Baydhabo ayaa banaanka soo dhigayay sida Mukhtaar Rooboow uu ugu daba faylay hoggaamiyaasha maamullada dabadhilifyada ah ee ku daba fayshan waxa loogu yeero beesha Caalamka.